အဲလဘတ်ရေကန် (အာဖရိက) - ဝီကီပီးဒီးယား
အဲလဘတ်ရေကန် ( Mwitanzige ကန်, ယခင်က Mobutu Sese Seko ကန် စသဖြင့် သိကြ) သည် ကွန်ဂိုနိုင်ငံနှင့် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည့် ကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤကန်သည် အာဖရိက၏ ခုနစ်ခုမြောက်အကြီးဆုံး ကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံး ကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Democratic Republic of the Congo၏ မြေပုံကို ပြသရန်
အာဖရိကတိုက်၏ မြေပုံကို ပြသရန်
1°41′N 30°55′E﻿ / ﻿1.683°N 30.917°E﻿ / 1.683; 30.917ကိုဩဒိနိတ်: 1°41′N 30°55′E﻿ / ﻿1.683°N 30.917°E﻿ / 1.683; 30.917
ကွန်ဂို နှင့် ယူဂန်ဒါ
၁၆၀ ကီလိုမီတာ (၉၉ မိုင်)
၃၀ ကီလိုမီတာ (၁၉ မိုင်)
၅,၃၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၂,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်)
၂၅ မီတာ (၈၂ ပေ)
၅၁ မီတာ (၁၆၇ ပေ)
၁၃၂ ကီလိုကုဗမီတာ (၃၂ ကုဗမိုင်)
၆၁၅ m (၂,၀၁၈ ft)
၃.၁ ငါးနှင့် ငါးဖမ်းခြင်း
အဲလဘတ်ရေကန်သည် အာဖရိကတိုက်၏ အလယ်ပိုင်း၊ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံနှင့် ကွန်ဂိုနိုင်ငံတို့၏ နယ်စပ်မျဉ်းကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Albertine အက်ကွဲကြောင်း၏ မြောက်ဘက်ဆုံးအပိုင်းနှင့် အရှေ့အာဖရိက အက်ကွဲကြောင်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ၁၆၀ ကီလိုမီတာ (၉၉ မိုင်) ရှည်လျားပြီး ၃၀ ကီလိုမီတာ (၁၉ မိုင်) ရှည်လျားသည်။ ကန်၏ အမြင့်ဆုံးအနက်သည် ၅၁ မီတာ (၁၆၇ ပေ) ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၆၁၉ မီတာ (၂၀၃၁ ပေ) အမြင့်တွင် တည်ရှိသည်။
အလွန်နက်သည့် ကန်များဖြစ်သည့် Lake Malawi, Lake Tanganyika နှင့် Lake Kivu စသည့်ကန်များနှင့် မတူသည်မှာ အဲလဘတ်ကန်၏ အပူချိန်သည် တည်ငြိမ်လျက်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ကန်၏ အပူချိန်သည် 27–29 °C (81–84 °F) ပတ်လည်တွင် ရှိပြီး နက်သည့်အပိုင်းများတွင် အောက်စီဂျင်ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ရေတွင် pH ၉ အောက် သို့မဟုတ် ပတ်လည်ခန့် ပါဝင်သည်။ လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းသည် 720–780 μS/cm ပတ်လည်ခန့် ရှိသည်။ ဤပမာဏသည် သန့်ရှင်းသည့်ရေကန်တစ်ခုအတွက် အလွန်မြင့်မားနေသော်လည်း အက်ဒဝါ့ရေကန်ထက် နိမ့်နေသေးသည်။
Giraffe by the lake
World Lakes Database entry for Lake Albert[လင့်ခ်သေ]
"East African Railways and Harbours, Marine Services": photos of East African lake ferries including SS Robert Coryndon
↑ ၁.၀ ၁.၁ The Nile။ October 6, 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Green, J. (2009)။ "Nilotic Lakes of the Western Rift"။ in H.J. Dumont (ed.)။ The Nile။ Monographiae Biologicae။ 89။ Springer Science + Business Media B.V။ pp. 263–286။ ISBN 978-1-4020-9725-6။
↑ Talling, J.F. (2009)။ "Physical and Chemical Water Characteristics"။ in H.J. Dumont (ed.)။ The Nile။ Monographiae Biologicae။ 89။ Springer Science + Business Media B.V။ pp. 367–394။ ISBN 978-1-4020-9725-6။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဲလဘတ်ရေကန်_(အာဖရိက)&oldid=665058" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၂:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၂:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။